UMilton Glaser umyili ngasemva ndiyayithanda iNew York | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UMilton Glaser umyili ngasemva ndiyayithanda iNew York
UMilton Glaser umyili ngasemva ndiyayithanda iNew York ngumhlobo umyili kunye nomzobi ephawule ngaphambi nasemva eNew York enkosi koku kungakholelekiyo Isindululo sephulo ukusuka kwesi sixeko.
Ibinzana elilula elinentliziyo ikwazile ukumela imeko ye ndinqwenela ukuba sesona sixeko sikhulu saseNew York. Iphulo lokwazisa eliya kuba yinyani Isimboli yaseNew York nakwezinye iindawo ezaziza kuthi kamva zikope uyilo olo ukuze lusetyenziswe kwizixeko zabo.
El umyili ngasemva ndiyayithanda iNew York ngumyili owaziwayo UMilton Glaser, Uzalelwe eNew York ngo-1929, lo myili wezinto kunye nomboniseli wayesele eme ngaphambili Inani elikhulu leeprojekthi ezibonakalayo kodwa lo msebenzi ungawenza ube ngumqondiso onzima ukulibala.
Uyilo lweGlaser NONE mediante izifinyezo kunye nokusetyenziswa kwesimboli (intliziyo) njengowona mfanekiso uphambili. Uyilo olulula olungena kwiliso ukususela kumzuzu owubonayo ude ucacise umyalezo. NgesiSpanish «Ndiyayithanda iNew York» idlulisela umbono we thanda indawo, thanda loo mzi sihlala kuwo. Ngokuqinisekileyo yiprojeki engacacanga yemizobo ye Iarhente ye-Wells Rich Greene.
Olu luyilo lwalunjalo isetyenziswe njengesikhumbuzo Kuzo zonke iintlobo zezinto zabakhenkethi apho uphawu lwalungoyena mtsalane ubonakalayo. Namhlanje kunokwenzeka ukuba ufumane ilogo kwi inani elikhulu lezinto zabakhenkethi, nkqu ezinye izixeko zakhuphela le ngcamango kwaye bayisebenzisa ngegama lesixeko sabo.
El Umzobo wokuqala yale logo sinokuyifumana ichazwe ngokusisigxina kwi-el Imyuziyam yoBugcisa bemihla ngemihla eNew York. Umzobo okhawulezayo obonisa ifayile ye ubungakanani bengcamango kaGlaser, abUkuphonononga amagama kwaye usebenzise uphawu lwentliziyo njengesifinyezo esibonakalayo segama UTHANDO.
Njengenxalenye ye- umkhankaso wokuthengisa Uthotho lweevidiyo zenziwe ukukhuthaza isiXeko saseNew York, kubandakanya Ingoma eqanjwe nguSteve Karmen.
Sele siyazi ukuba ngubani osemva kolu loyilo lubalaseleyo oluphawule ngaphambi nasemva kwiSixeko saseNew York. Iglasi ingaziwa ukusuka kuloo mzuzu njenge indoda esuka entliziyweni yaseNew York.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » UMilton Glaser umyili ngasemva ndiyayithanda iNew York
Uyenza njani i-screensaver okanye iphepha lodonga ngeefoto ze-Instagram?
I-GIMP isungula ingxelo entsha ngotshintsho lwenoveli kuyilo lwayo